Kufambidzana Kwemagariro: Nei, riini & Sei
Pakutanga yakabudiswa naAriadne Labs musi waKurume 13, 2020 pasi pemusoro wakanzi "Kufambidzana Kwemagariro: Rino harisi zuva rechando" | Yakagadziriswa Chivabvu 14, 2020
Ichi chinyorwa chakanyorwa nemunhu weUS uye mune zvakadaro, ine ruzivo uye mareferensi eUSA Asi zvakawanda zvemukati zvirimo zvinokodzera chero nyika uye tsika munyika zvakare
NaAsaf Bitton, MD, MPH
Ndinoziva kuti pane kumwe kuvhiringidzika pamusoro pekuita chinotevera mukati menguva ino isina kumboitika yedenda, kuvharwa kwechikoro, uye kukanganisika munharaunda. Semurapi wekutarisira uye mutungamiri wehutano hweveruzhinji, ndakabvunzwa nevanhu vazhinji kuti vandipe pfungwa dzangu, uye ini ndichazvipa pazasi zvichienderana neruzivo rakanakisa rwunowanikwa kwandiri nhasi. Aya ndiwo maonero angu pachangu, uye kutora kwangu pane matanho anodiwa ari pamberi.
Chandinogona kutaura zvakajeka ndechekuti zvatinoita, kana kuti tisingaite, vhiki rinotevera zvichave nemhedzisiro inonyanya kuitika munharaunda uye pamwe yenyika trajectory ye coronavirus. Isu tangova mazuva gumi neshanu kuseri kweItari ( US data ) uye kazhinji patroti kudzokorora izvo zvsiri kuitika ikoko uye munguva zhinji yevamwe Europe munguva pfupi.
Panguva ino, chinhu chinowanikwa kuburikidza nekusangana nekutsvagisa uye kuwedzera bvunzo chiri chikamu chechirongwa chakadikanwa. Isu tinofanirwa kuenda kune dambudziko rekudzivirira kuburikidza nekupararira, kusagadzikana, uye kuzara kwenharaunda kuderera . Izvi zvinoreva kwete kungovhara zvikoro, kushanda (zvakanyanya sezvazvinogona), kuungana kwemapoka, uye zviitiko zveveruzhinji, asi zvakare kuita sarudzo dzemazuva ese dzekugara kure kubva kune mumwe nemumwe zvakanyanya sezvinobvira kuFlatten The Curve pazasi.
Hutano hwehutano hwedu hahugone kumira nehuwandu hwekufungidzirwa hwevanhu vanozoda kuchengetwa kwakakomba kana isu tikasasangana nemasimba uye tichizogarisana munharaunda tichibva zvino. Pazuva roga roga, isu tine zviuru makumi matanhatu zvevashandi veku ICU pamibhedha pamadziro, izvo zvinogona kugadzirwa mudambudziko kusvika kuma 95,000 ( data reUS ). Kunyangwe zvifungidziro zvine mwero zvinoratidza kuti kana maitiro aripo ekutapukira abata, kugona kwedu (munharaunda nekumunyika) kunogona kuve kwakawandisa kutanga pakati pekupera kwaApril. Nekudaro, mazano chete anogona kutibvisa pane izvi nezve trajectory ndeaya anotigonesa kushanda pamwechete senharaunda kuchengetedza hutano hweveruzhinji nekugara takaparadzana.
Huchenjeri, uye kukosha, kweiyi inonyanya kurwisa, yekutanga, uye yakanyanyisa nzira yekuremekedza nzanga inogona kuwanikwa pano . Ndinokukurudzira kuti utore miniti kufamba nemagiraidhi anotarisana - ivo vanozodzosera kumba pfungwa nezvezvatinofanira kuita izvozvi kudzivirira dambudziko rakaipisisa gare gare. Zvidzidzo zvemberi nezviitiko zve nyika dzepasi rese dzakatiratidza kuti kutora zviito izvi pakutanga kunogona kukanganisa zvakanyanya kukura kweizvozvo. Saka izvi zvinowedzerwa fomu yekudyidzana munharaunda zvinorevei zuva nezuva, kana zvikoro zvichidzimwa?
Aya matanho aunogona kutanga kutora izvozvi kuti uchengetedze mhuri yako uye ita chikamu chako kudzivirira dambudziko rekuwedzera:
1. Tinofanirwa kusundidzira vatungamiriri vedu vemuno, yenyika, uye yenyika kuti vavhara IZVO zvikoro zvese nenzvimbo dzeveruzhinji nekumisa zviitiko zvese nekuungana kwevanhu ikozvino .
Yenzvimbo, dhorobha nedhorobha mhinduro haina kuzova yakakwana inodiwa mhedzisiro. Isu tinoda nzira yenyika, yenyika yese munguva dzino dzinoedza. Bata mumiriri wako uye gavhuna wako kuti avakurudzire kuti vatongese nyika kuvharwa. Kubva nhasi, nyika nhanhatu dzakatozviita. Nyika yako inofanirwa kunge iri imwe yadzo. Kurudzirawo vatungamiriri kuti vawedzere mari yekugadzirira nekukurumidza uye nekuwedzera kuwona kwe coronavirus kugona nekukoshesa. Isu tinodawo vamiririri vemitemo kuti vagadzise mabhenefiti ekurwara ari kubhadharwa uye ekushayikwa kwemabasa kuti vabatsire vanhu kuita runhare rwekuti vagare pamba izvozvi.
2. Hapana mwana anotamba, mapati, vanovata, kana mhuri / shamwari dzinoshanyira dzimba dzemumwe neumwe nedzimba.
Izvi zvinonzwika zvakanyanya nekuti ndizvo. Tiri kuedza kuumba kure pakati pemitezo yemhuri uye pakati pevanhu. Zvinogona kunge zvakanyanya kusagadzikana kumhuri dzine vana vadiki, vana vane mutsauko kana zvinonetsa, uye kune vana vanongoda kutamba neshamwari dzavo. Asi kunyangwe kana ukasarudza shamwari imwechete kuti uve nezvakawandisa, urikugadzira zvitsva zvinongedzo uye mukana weiyo mhando wekutapurirana uyo zvese zvedu chikoro / basa / yeruzhinji chiitiko kuvhara vari kuyedza kudzivirira. Zviratidzo zve coronavirus zvinotora mazuva mana kusvika mashanu kuti azviratidze. Mumwe munhu anouya akatarisa zvakanaka anogona kupfuudza hutachiona. Kugovera chikafu kune njodzi zvakanyanya - ini handikurudzire kuti vanhu vadaro kunze kwemhuri.
Takatotora matanho akasarudzika ekugarisana nechirwere ichi chakakomba - ngatiregei kushandira pamwe simba redu nekuve nekudyidzana kwenzvimbo padzimba dzevanhu panzvimbo pezvikoro kana nzvimbo dzekubasa. Zvekare - huchenjeri hwekutanga uye hutsinye hwemagariro ekuenda kure nharaunda ndeyokuti inogona kubhururuka iyo kumusoro, kupa hutano hwedu hutano mukana wekuti usaremerwa, uye pakupedzisira unogona kuderedza urefu uye kudikanwa kwenguva refu yekunyanyisa kufambidzana munharaunda gare gare (ona chii chine yakafambiswa muItari neWuhan). Tinoda kuti tese tinoita chikamu chedu panguva dzino, kunyangwe kana zvichireva kusagadzikana kwechinguvana.
3. Zvitarisire iwe nemhuri yako, asi chengetedza nzanga.
Rovedza muviri, tora mafambiro / kumhanyisa kunze, uye ugare wakabatana nefoni, vhidhiyo uye zvimwe zvinoshandiswa munhau. Asi paunobuda kunze, ita zvese zvaunogona kuti uchengete kusvika tsoka nhanhatu pakati pako nevasiri nhengo yemhuri. Kana iwe uine vana, edza kusashandisa zvivakwa zveveruzhinji sezvivakwa zvemitambo, sezvo coronavirus inogona kugara papurasitiki nesimbi kwemazuva anosvika mapfumbamwe, uye izvi zvisikwa hazvisi kugara zvichicheneswa.
Kuenda kunze kunokosha panguva dzino dzinoshamisa, uye mamiriro ekunze ari kuita zviri nani. Enda kunze zuva rega rega kana uchikwanisa, asi gara zvakanaka uine vanhu kunze kwemhuri kana vaunogara navo. Kana iwe uine vana, edza kutamba mutambo wenhabvu wemhuri pane kuita kuti vana vako vatambe nevamwe vana, sezvo mitambo ichiwanzoreva kutarisana zvakatarisana nevamwe. Uye kunyangwe isu tichishuvira kushanyira vakuru munharaunda medu, ini handingashanyire dzimba dzevakweguru kana dzimwe nzvimbo dzinogara huwandu hwevakuru, nekuti vari panjodzi huru nekuda kwekunetseka uye kufa kwevanhu kubva kuoronavirus.
Kufambidzana munharaunda kunogona kutora mutero (shure kwezvose, vazhinji vedu zvisikwa zvemagariro). Iyo CDC inopa matipi uye zviwanikwa zvekudzikisa uyu mutoro, uye zvimwe zviwanikwa zvinopa nzira dzekutsungirira nekushushikana kwakawedzerwa panguva ino.
Tinofanirwa kutsvaga dzimwe nzira dzekuderedza kusarudzika munharaunda nharaunda kuburikidza neicho nzira panzvimbo yekushanya mukati mevanhu.
4. Deredza kuwanda kwekuenda kumazvitoro, kumaresitorendi, uye kumaresi ekofi enguva iripo.
Ehe saizvozvo kuenda kunzvimbo yekutoro kunenge kuri madikanwa, asi edza kudzikamisa uye enda pane dzimwe nguva pavanenge vasina kubatikana. Funga kukumbira zvitoro zvechitoro kuti zvidzore vanhu pamusuwo kuitira kudzikamisa huwandu hwevanhu vari mukati mechitoro chero nguva. Rangarira kugeza maoko ako zvakakwana usati wafamba uye mushure merwendo rwako. Uye siya masks ekurapa uye magurovhosi kwevashandi vekurapa - tinoda ivo kuti vatarisire vanorwara. Ramba uri kure kubva kune vamwe uchinotenga - uye yeuka kuti kuisa zvinhu zvinokuvadza vamwe kunokanganisa vamwe saka tenga zvaunoda uye wasiyira vamwe vese. Tora-kunze chikafu uye chikafu chiri riskier pane kugadzira chikafu kumba chakapihwa hukama pakati pevanhu vanogadzira chikafu, kutakura chikafu, uye iwe. Zvakaoma kuziva kuti njodzi iyi yakawanda sei, asi zvirokwazvo yakakwira kupfuura nekuigadzira kumba. Asi iwe unogona uye unofanirwa kuramba uchitsigira ako emabhizimusi madiki emuno (kunyanya maresitorendi nevamwe vatengesi) panguva ino yakaoma nekutenga zvitupa zvepamhepo online zvaunogona kushandisa gare gare.
5. Kana iwe uchirwara, zvimure pache, gara pamba, uye bvunza nyanzvi yekurapa.
Kana iwe uchirwara, iwe unofanirwa kuedza kuzviparadzanisa nevamwe vese mumhuri yako mukati mekugara kwako nepamunogona napo. Kana iwe uine mibvunzo pamusoro pekuti unokodzera here kana kuti unofanirwa kuwana bvunzo ye coronavirus, unogona kufonera timu yako yekutarisira uye / kana kufunga kufonera iyo Massachusetts Dhipatimendi reHurumende Hutano pa617.983.6800 (kana dhipatimendi rezvehutano renyika yako kana uri kunze kweMassachusetts . Usangofambira mukiriniki yekuvhetemesa - tanga kufonera kuitira kuti vagokupa zano rakanakisa - ringave rekuenda kunzvimbo inoongororwa kana kushanya chaiko vhidhiyo kana foni. Ehezve, kana iri emergency call 911.
Ndinoona kuti pane zvakawanda zvakavakirwa mune izvi mazano, uye kuti iwo anomiririra mutoro chaiwo kune vakawanda vanhu, mhuri, mabhizinesi, uye nharaunda. Kufambidzana munharaunda kwakaoma uye kunogona kukanganisa vanhu vazhinji, kunyanya avo vanosangana nekusagadzikana munharaunda yedu. Ini ndinoona kuti kune kurongeka uye kwakasarudzika kusaenzana kwakavakirwa mukati uye kutenderera munharaunda kutenderera kurudziro. Tinogona uye tinofanirwa kutora matanho kusimbisa nharaunda yedu kupindura kune vanhu vakatarisana nekushomeka kwechikafu, mhirizhonga mudzimba, nematambudziko edzimba, pamwe nezvimwe zvakashata munharaunda.
Ini zvakare ndinoona kuti havasi vese vanogona kuita zvese. Asi isu tinofanirwa kuedza nemhedzisiro yedu senharaunda, kutanga nhasi. Kukurudzira kufambidzana munharaunda, kunyangwe nezuva rimwe, kunogona kuita musiyano muhombe .
Tine mukana wekufungidzira kuponesa hupenyu kubudikidza nezvatinoita isu izvozvi izvo zvatisingazove nemavhiki mashoma. Ihwo hutano hwakakosha. Iri zvakare ibasa redu sevagari kuita kana tichine sarudzo uye nepo zviito zvedu zvichikwanisa kuita zvakanyanya.
Asaf Bitton, MD, MPH, ndiye director director weAriadne Labs muBoston, MA.
Dhawunorodha rinogona kudhindwa PDF chinyorwa ichi
Unoda kugadzirisa shanduro? Verenga uye ugovera kune iyo code code . Mufananidzo kubva kune opendoodles
Nei iyi webhusaiti? Pakutanga ndaida kugovera chinyorwa chekutanga kuvavakidzani vangu muFrance. Asi nekuziva kuti ivo havana kuverenga Chirungu, uye kuti ini ndaida kubatsira mukuyedza kushambadzira kwenzanga, ndakagadzira iyi webhusaiti.
Iyi webhusaiti inoshandisa Google Dudziro kuita kuti zvirimo zvivepo kumitauro gumi nemashanu.
Saiti webhusaiti: https://staythefuckhome.com/ .